TENY Fito:(7) – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 18, 2012 Laisser un commentaire sur TENY Fito:(7)
» Raiko ô! eo an-tananao no atolotro ny fanahiko » Lioka 23:46
Rehefa maizina nandritry ny adin’ny telo ny antoandro satria niha-maizina ny masoandro, ary triatra misasaka ny efitra lamba tao amin’ny tempoly, dia io no teny nataon’ny Tompo! Mbola vavaka ihany koa io, satria resaka nataony’i Jesosy tamin’Andriamanitra Rainy.
Vavaka mitory inona izao vavaka izao? Zavatra telo no azo ambara:
-Vavaka mitory fahatokiana: Jesosy Ilay Zanaka matoky ny Rainy. Na dia eo am-pialana aina aza Izy, dia izao mametraka ny fatokisany amin’ny Rainy izao. Sarobidy tokoa ny fanahy na dia ho an’ny olombelona tsotra aza, ary tsy atolotolotra olona tsy atokisana ny zavatra sarobidy fa ho an’izay tena azon’ny eritreritra antoka. Tena tafatoetra amin’ny Finoana marina Jesosy na dia amin’ny fotoana sarotra indrindra aza, dia ny fotona fialana aina.
Ohatra fakan-tahaka izao asehon’ny Tompontsika izao. Tsy mahazo miahotrahotra isika amin’ny fahatokiana an’ Andriamanitra izay tsy mitady afa-tsy ny hahasoa antsika. Raha sendra ny fotoan-tsarotra isika,dia vao maika tokony hihamafy orina ny finoantsika an’i Jesosy!
-Vavaka toa mampiseho fahefana. Manana fahefana hanolotra ny fanahiny i Jesosy. Voalaza fa faran’izay fotoan-tsarotra eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny fotoana fialana aina. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ahoana tokoa moa no hananana fanahiana ny amin’ny fanahy atolotra ho eo ampelatanan’ny Ray, ary ny teniny dia manambara indrindra fa tsy hisy haharombaka izay eo am-pelatanany.
-Vavaka manambara fa tena vita tokoa ny andraikitra izay napetraka tamin’ny Tompo Jesosy, ka an’Andriamanitra Ray ny manapa-kevitra ny amin’izay hatao manaraka izao. Marina fa ny Tompo Jesosy sy ny Ray dia iray ihany, nefa ny andraikitry ny Zanaka dia tsy mifanitsaka amin’ny andraikitry ny Ray. Ny Zanaka manao ny asan’Izay naniraka Azy (vakio Jaona 9:4). Efa misy fifandaharana tongalafatra eo amin’ny fifandraisan’ny Ray sy ny Zanaka. Ny olona ho faty dia misy tokoa ny resaka fanolorana ny fanahy. Ny fanahin’ny maty anefa dia iray amin’ireto làlana roa ireto no alehany: ho any amin’Andriamanitra Ray na any amin’ny helo miaraka amin’i Satana. Miseho eto ny maha Andriamanitra an’i Jesosy: Izy mihitsy no manolotra ny fanahiny eo am-pelatanan’Andriamanitra Ray.
Kristy Santatra ho antsika, ny amin’ny fitsanganana amin’ny maty, ary santatra ho antsika ny amin’ny làlana tokony alehantsika rehetra aorian’izany.
Izao anio izao!
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2012 Publié dansUncategorizedÉtiquettes : religion